Shir lagu diidan yahay Gudniinka Fircooniga ah oo lagu qabtay Boosaaso (Sawiro) – Radio Daljir
Diseembar 12, 2012 12:21 g 0
Boosaaso, Dec 12, Shir looga hadlayey sida ugu haboon ee loo joojin karo dhibaatooyinka uu haweenka Soomaaliyeed ku hayo Gudniinka xun ee loo yaqaano kaasoo ay dhibaato kala kulmaan malaayiin kamid ah haweenka Soomaalida.
Shirkan oo maanta lagu qabtay ?Hotelka Banarama ee magaalada Boosaaso, ayaa ?waxaa kasoo qeyb ergooyin ?ka kala socodey sideeda Gobol ee Puntland, Culimaa`udiin, Nabadoono, Aqoonyaho, Fanaaniinta Waaberi Puntland, masuuliyiin kasocotey hay’ada Unicef, madaxda sare ee Puntland iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada rayidka ah.
Kulanka waxaa ?diirada lagu saarayey dhibaatooyiinka uu gudniinka xun ee Fircoonigahi ku hayo haweenka Soomaaliyeed Waxaana iska kaashanaya Wasaarada haweenka iyo arimaha qoyska Dawlada Puntland iyo Hay’ada Unicef iyadoona ay gacan ka geysanayaan, Wasaaradaha Caafimaadka iyo Diinta iyo Aw-qaafta Puntland.?
Hal kudhiga Munaasabadan oo ahaa (Wax badali kara abuurka eebe majiro) ayaa dadkii kasoo qeyb galay dhamaantood waxa ay gacanta utaageen in la iska kaashado joojinta Gudniinkan.
Madaxweynaha Dawlada Puntland Dr C/raxmaan Maxamed Sheekh Maxamuud (Faroole) ayaa ugu baaqey shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadweynaha kunool deegaanada Puntland in kawaantoobaan adeegsiga Gudniin Fircooniga ah.
“Dhibaatooyiin weyn oo mid Maskaxeed mid Jismi mid Caafimaad iyo mid curyaamin ah ayuu Mushtamaca lasoo jiitamaayey inta uusoo jirey Gudniinkan xun sidaa daraadeed waxaan u sheegayaa shacabka Puntland in lajoojiyo Gudniinkan aan ku salaysnayn diinta Islaamka”, ayuu yiri M/weyne Faroole.
Caadada xun ee Gudniinka Fircooniga ah waa dhaqan soo jireen ah oo mudo Qarniyo ah ay ku dhaqmayeen dadka Soomaalida, Waxaana adkaatey in laga gudbo dhaqankan xun.
Mudo kaban 30-sano ayaa laga wadey Soomaaliya wacyigelino laxiriira katagista caadada xun ee Gudniinka gabdhaha oo laga sameeyey Miyiga iyo Magaalooyinka, ummad walba waxay leedahay dhaqan iyo caado, mararka qaar waxay noqon karaan dhaqamadaasi kuwa waxyeelo ba’an u geysta Caafimaadka bulshada, Gudniinka Dumarka wuxuu ka mid yahay dhaqamada soojireenka ah ee halista ku ah noolasha gabdhaha Soomaaliyeed kaasoo ay joogteeyeen adeegsigiisa Bulshada.
Axmed Nuur Ibraahim (Soomaali)
Gudoomiyaha Baarlamaanka Jabuuti oo booqday Muqdisho (Sawiro)